LG na-ewebata ndị nlele ọhụrụ 3 maka ndị hụrụ egwuregwu vidiyo | Akụkọ akụrụngwa
Na egwuregwu vidio, ọ bụrụ na akụrụngwa anyị kwere ya, ọnụego dị elu nke okpokolo agba kwa nkeji (Fps) dị ka nnukwu mmiri mmiri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndị otu anyị ejikọtaghị nyocha nke nwere ike igosipụta otu ọkwa FPS, mmetụta nke ịmịnye mmiri ga-apụ kpamkpam
Ihe nlere ohuru nke LG ka gosiputara na IFA 2019, nye anyị a ume si 144 Hz ruo 240 Hz, iji mee ka ndị ọrụ niile na-achọ imegharị ihe nyocha ochie ha.
1 LG 27GN750 Nyochaa
2 LG 27GL850 Nyochaa
3 38GL950G Nyochaa
LG 27GN750 Nyochaa
LG's 27GN750 na-enye anyị panel na teknụzụ 27-anụ ọhịa IPS nwere mkpebi HD zuru ezu (1920 × 1080). Ihe kachasị dị iche iche nke ihe nlereanya a bụ na ọ na-enye anyị ume ume nke 240 Hz, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ nyocha nke ụdị a, ị ga-etinye ihe nlere a na ndepụta ndị ịchọrọ.
Ọ na-enweta nchapụta nke nits 400 na sRGB agba gamut bụ 99%. Oge nzaghachi bụ naanị 1 ms, ọ bụ HDR10 kwekọrọ na dị ka ezigbo nyocha nke chọrọ ma dakọtara na NVIDIA G-SYNC. O nwere ọdụ ụgbọ mmiri 2 HDMI na ọdụ USB-C 3.0.
Banyere nnweta, n'oge anyị amaghị ụbọchị ọ ga-erute ahịa Spen na ọ dịghịkwa anyị amaghị ụgwọ ikpeazụ ya
LG 27GL850 Nyochaa
Ihe nlere LG a nyere anyi 27-inch nano IPS panel na 2k mkpebi (2.560 × 1.440). Ìhè nke ọ na-enye anyị ruru 350 na agba gamut bụ P3 na 98% (sRGB 135%). LG 27Gl850 na-enye anyị oge nzaghachi nke 1 ms na ọnụego ume ọhụrụ nke 144 Hz.
Dị ka ihe atụ gara aga, na-akwado NVIDIA G-SYNC na HDR10Ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI abụọ na otu ọdụ ụgbọ USB-C 3.0. Ngwa LG 27GL850 a dị ugbu a na Spain maka euro 499.
Ihe nlere a bu nke kachasi nke ohuru nke onye LG na-emeputa Korean na IFA gosipụtara, ebe ọ ruru na 37,5 sentimita asatọ ma nwee mkpebi 4k (3.840x.1600). Ijupụta kachasị nke ọ ruru bụ nits 450 na agba gamut bụ DCI-P3 98% (sRGB 135%). Banyere ọnụego ume ọhụrụ, nke a bụ 144 Hz, enwere ike ịkwụsị ya na 175 Hz).
Nzaghachi nke LG 38GL950G nyochaa bụ 1 ms, ọ dakọtara na VESA Display HDR 400 yana NVIDIA G-SYNC. Ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI na USB-C 3.0 ọzọ. Pricegwọ nke ihe nlere a bụ euro 1.999 ma ọ ga-adị site na Nọvemba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » LG na-ewebata ndị nlele ọhụrụ 3 maka ndị hụrụ egwuregwu vidiyo